စစ်ကိုင်းတိုင်းသို့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် စီမံကိန်းများ လေထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ် - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်းသို့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် စီမံကိန်းများ လေထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်
”တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှာရှိတဲ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက် မှုဇုန်နဲ့ သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းတွေ လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချတဲ့ အစိမ်းရောင်းနည်းပညာတွေ အစားထိုးသုံးရမှာပါ ”ဟု ၎င်းင်း ကပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော ဆား လင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မှသုံးသော အက်စစ်ငွေ့များ လေထုအတွင်း ပျံ့နှံ့၍ သီးနှံ စိုက်ခင်းများပျက်သည်ဟုဆို ကာ ဒေသခံများက နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ မုံရွာခရီးစဉ်တွင် တိုင်ကြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မိုးရွာသွန်းပြီးနောက် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ရိုးကုန်းကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၂ဝခန့်၏ အိမ်ဝိုင်းမျာ?
ဥရောပမြောက်ပိုင်း ဖရက်ဒရစ် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်၊ ကိုးဦးသေဆုံး
ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ အမုန်းတရားများ ဖြန့် ဖြူးနေမှုကို ရှုတ်ချသည့် အနေဖြင့် နှင်းဆီဖြူ လှုပ်ရှားမှု??
ဂူအရေအတွက် တစ်ဝက်ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သည့် ငါးထပ်ကြီး ဘုရားအနီးရှိ မင်းတုန်းမင်း၏ ‘ဆွေတော် မျ
ခန္တီးမြို့၌ ကျောက်မျက်ရတနာဈေး တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် မြေနေရာ ရှာဖွေနေ
ရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော်တွင် ဈေးသည်များ အမြဲရောင်းချနေသည်ေ စောင်းတန်းကို သံဆန်ခါများ ကာလိ
အောင်လံမြို့နယ် အတွင်း၌ မိုးစပါးစတင် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အထွက်နှုန်း သင့်တင့်သော်လည်း စပါး??
”မြေပဲယိုအဖွဲ့က ပျက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏရပ်သွားတာပါ” မင်းမော်ကွန်း